बन्दुकको छाया | samakalinsahitya.com
- होमशंकर बास्तोला
ऊ त्यो बिद्रोही जो अनेकौं युद्धमा सामेल थियो । युद्ध मैदानमा भएका यावत घटनाहरुप्रति ऊ विज्ञ थियो । घाइतेका ककर्श आवाज र चीत्कारका स्वरहरु उसले राम्ररी सुनेको थियो । युद्ध लड्दालड्दै मृत्युमा विलीन हुन लागेका र जिन्दगीको भीख मागिरहेका दृष्यहरु उसले राम्ररी देखेको थियो । आफ्ना मित्रहरु आफ्नै आँखा अगाडि गोली र बारुद पिएर मृत्युवरण गरेका ह्रदयविदारक अवस्थाहरुलाई उसले नजिकबाट अवलोकन गरेको थियो । ऊ युद्धमैदानमा हुँदा आफ्नो योजना अनुसार सम्पूर्ण बिद्रोही साथीहरुलाई दुस्मनको बिरुद्धमा लड्न उत्साहित गरिरहन्थ्यो ।
उसका धेरै योजनाले सफलता पाएका भए पनि एउटा दुस्मनको क्याम्पलाई उसको योजनाअनुसार आक्रमण गर्दा सफलता पाउन सकेको थिएन । तीनचार चोटि नै उनीहरुले दुस्मनको इलाकामा धावा बोलिसकेका थिए । दुस्मनको इलाका पहाडको माथि डाँडो ठाउँमा थियो । कार्यालय र निवासमुनि खोलाको किनार र गहिरो ठाउँ भएकाले लड्न कठिन थियो । क्याम्पबाट टाढाटाढा देखिने हिमालको सुन्दर चमक देखिरहेको र पहाडमुनि कलकल बगिरहेको खोलाको सुसेली आइरहेको हुन्थ्यो । क्याम्प सुरक्षाका लागि सेन्ट्रीमा बसेको सिपाहीलाई कलकल बगिरहेको खोलाको अवाजले उसको ह्दयलाई तरङ्गित पारिरहन्थ्यो । चुक पोखेजस्तो रातको अन्धकारमा आएको कुनै आवाज उसको र क्याम्पमा रहेका फौजीहरुको कानमा ठोक्किदा उनीहरु सर्तक रहन्थे । यसरी नै उनीहरुले धेरै रात बिताएका थिए । झिसमिसमा भाले बासेको आवाज पारि गाँउमा सुनेपछि त्यो रातबाट बाँचेको आभास उनीहरुलाई हुन्थ्यो ।
ऊ जो बिद्रोही दुस्मनको क्याम्पमा पुगेर सूचना प्राप्त गर्न चाहन्थ्यो । तर उक्त कार्य र उसको यात्रा कठिन थियो । ठाउँठाउँमा दुस्मनका चेकपोष्टहरु थिए । उनीहरुले थाहा पाउने बित्तिकै ऊ पक्राउ पर्न सक्थ्यो वा मारिन सक्थ्यो । तर उसले दृढ निश्चय ग¥यो । ऊ दृढ लक्ष्य प्राप्तिका लागि ज्यानको बाजी राख्दै विभिन्न ठाउँमा रहेका प्रहरीका चेकपोष्टहरु पार गर्दै दुस्मनको क्याम्पतिर बढिरहेको थियोे । ऊ त्यसरी अघि बढ्दा साधारण भेषमा थियो । प्रहरी चेकपोष्टमा उसलाई देख्दा ऊ कुनै गाउँको वासिन्दा होला भन्ने सोचेर प्रहरीले छाडिदिइरहेको थियो । जीवनमा उसले विभिन्न किसिमका अनुभवहरु हासिल गरेको थियो । वर्तमानमा उसको लामो भूमिगत जीवनको अनुभव थियो । गाउँमा गाइबाख्रा चराउँदा र कतै फिर्काउँदा ढुङ्गा हानेर फिर्काउने र लठ्ठीले खेद्ने गरेको अनुभव भए पनि ऊ बिद्रोहीमा सामेल भएपछि बन्दुक बोक्न जानेको थियो । बन्दुक पड्काउन जानेको थियो । ऊ खानेपानीका फलामका पाईँपहरुमा बारुद तथा बिस्फोटक पदार्थहरु हालेर बम बनाउँथ्यो । उसले पार्टीको निर्देशनमा धेरै ठाउँमा बम बिस्फोटन गराएको थियो । उसले गरेको विस्फोटनमा जेजस्तो क्षति भए पनि ऊ एकपटक अलि दुःखी भएको थियो । उसले बिछ्याएको बारुदमा परेर हलो जोत्दै गरेको धने माइलो र एकहल गोरु ठहरै भएका थिए । गोरुको मायाभन्दा उसलाई धने माइलाको धेरै माया लागेको थियो । धने माइलो गाउँको गरिब थियो । उसको एउटा सानो छाप्रो थियो । वर्षायाम्मा पानी पर्दा उसको चुल्हो हिलै हुन्थ्यो । उसको परिवारमा कोही थिएन । गतवर्ष मेलाबाट फर्केदै गर्दा उसकी श्रीमती बर्बाेटेको पहिरोले किचेर ठहरै भएकी थिई । त्यसले ऊ धेरै दुःखी भएको थियो । उसकी स्वास्नी मरेको दुई महिना अगाडि डाँडघरे महाजन मर्दा खोलामा मान्छेहरुको अटिनअटि उपस्थिति थियो । तर उसकी श्रीमतीको मलामीमा वीस जना मान्छे पुग्न हम्मेहम्मे परेको थियो । त्यस पहिरोमा परेर मृत्यु भएका र आर्थिक सहायता माग्न सदरमुकाम पुग्नेहरुले प्रशासनबाट केही राहत पाए भन्ने उसले सुनेको थियो । ऊ सदरमुकाम पुग्न समेत पैसा नभएको कारण उसले दैविप्रकोप सहायता पाउने कुरै थिएन । एकदिन मालिकको खेत जोतेर फर्कदै गर्दा धने माइलोसँग उसको भेट भएको थियो । ‘बाबु ! सहरबाट कहिले आउनुभो ? साँच्ची ! बाबु त सहरबाटै आन्दोलनमा लाग्नुभो रे नि ? हामी गरिबहरुका लागि तपाईहरुले आन्दोलन गरेको रे ! हो बाबु ?’ धने माइलाले उसलाई प्रश्न गरेको थियो । ‘हो दाइ ! हामी यी सामन्तीहरुको बिरुद्धमा लडिरहेका छौं । तपाईहरुले हामीलाई साथ दिनुपर्छ ।’ उसले उसको साथ मागेको थियो । ‘अर्काको नजोती खान पाइने होइन । हामी गरिबको जिन्दगी हलो कोदालोमा बित्छ ।’ धने माइलोले हातले निधारको पसिना पुछ्दै हरिसले भुइँमा टेकेर ढड्याएको हलो काँधमा हालेर उक्कालो लागेको थियो । धने माइलाले लगाएको कपडा र उसको अवस्था देखेर उसलाई दया लागेको थियो ।
केही दिनपछि धने माइलो बिस्फोटनमा परेर मरेको सूचनाले उसको ह्दयमा अलिकति पीडा भएको थियो । ‘हामी गरिब र शोषित जनताको पक्षमा लडिरहेका छौं, तर हाम्रो निशाना उनीहरु नै किन बनिरहेका छन् ? छ्या ! निर्दोश मान्छेको सफाया गर्नु हाम्रो भूल हो । त्यसर्थ युद्धको चपेटामा परेका ती निर्दोश आमाहरु, बच्चाहरु, वृद्धहरु र आमनागरिक मारिएकोमा उनीहरुका आफन्तसँग क्षमा माग्नै पर्छ । नत्र इतिहासले हामीलाई धिक्कार्ने छ ।’ उसले यस्तै सोचेको थियो त्यतिखेर ।
ऊ अझै भूमिगत थियो र उसको रेकर्ड प्रत्येक चौकीहरुमा पु¥याइएको थियो । ऊ भूमिगत हुँदा उसको नाम भूमिगत थियो । प्रहरीले उसको फोटो प्राप्त गरेर त्यसैको आधारमा पक्रने योजना बनाएको थियो । प्रहरीले जारी गरेको पक्राउ गर्ने लिष्टमा उसको भूमिगत नाम भए पनि सक्कली नाम र फोटो फेला पार्न सकेको थिएन । त्यसर्थ पुलिसले पक्राउ गर्न नसके पनि केही रेकर्डहरु प्राप्त गरेको थियो । शङ्कास्पद व्यक्तिहरुको नाम लिष्टमा उसको पनि नाम आर्मीक्याम्प, सुरक्षाकर्मीहरुको क्याम्प र सम्पूर्ण प्रहरी चौकीहरुमा पु¥याइएको थियो । तर ऊ आफ्नो चलाखी प्रदर्शन गर्दै र प्रहरीपोष्टहरु पार गर्दै सैनिक क्याम्प नजिक पुग्यो । ऊ क्याम्प अगाडि हिँडिरहँदा बर्दी लगाएको र कुममा विभिन्न चिन्ह भएको एउटा अग्लोअग्लो मान्छे उसले देख्यो । ऊ झस्कियो । ‘ओ ! मित्र कता ? धेरै दिनपछि भेट भयो नि ?’ उसले आश्चर्य मान्दै ऊसँग हात मिलायो । ‘मित्र ! म पारि गाउँमा हिडेको, त्यहाँ आफ्नो मान्छेलाई भेट्नु थियो ?’ उसले शङ्का मेटाउने प्रयास ग¥यो । ऊ उसको विद्यार्थीकालको मिल्ने साथी थियो । विद्यार्थीकालको पढाइमा ऊभन्दा बढी जान्ने भएकाले उसलाई धेरै सहयोग गरेको थियो । मेजरले उसलाई त्यही बस्ने आग्रह गर्दै भन्यो ‘मित्र के गर्दे हुनुहन्छ ? आज यतै बसौं । धेरै भयो हाम्रो भेट नभएको पनि ।’ उसले त्यहाँ बस्ने आग्रह गर्दा नगर्दै ऊ त्यो क्याम्पको प्रमुख हो भन्ने थाहा पाइसकेको थियो । अब उसलाई ढुङ्गा खोज्दा देउता मिलेझैं भयो । ‘हुन्छ नि ! धेरै भयो भेट नभएको पनि ? तपाईसँग भेट गर्ने धेरै प्रयास गरेको थिएँ तर आजसम्म सम्भव भएको थिएन । तपाई मेजर हुनुभो भन्ने सुनेको त थिएँ तर बधाईसम्म दिन पाएको थिइनँ । आज अकस्मात भेट भयो । ईश्वरले पनि जुराएरै आज भेट गराएजस्तो लागिरहेछ ।’ उसले उसको मन जित्न अनेक बढाइचढाइ ग¥यो । ऊ उसको विश्वासपात्र बनेर क्याम्पमा छिर्न चाइरहेको थियो । विद्यार्थीकालमा ऊ जति नजिक थियो, त्यत्ति नै ऊ नजिक हुन चाहन्थ्यो । उसले उसलाई भेटेर सजिलो महसुुस गरेको बतायो । धेरैपछि मित्रसँग भएको भेटको खुसियालीमा खाइपियाइको राम्रो व्यवस्था मिलाएको थियो । ऊ पिउने भए पनि मित्रको आग्रहलाई नकार्न नसकेर थोरै पियो र मातेको अभिनय ग¥यो । उनीहरु त्यहाँ पिइरहँदा त्यस क्याम्पको सुरक्षालगायतका कुराहरु र कमजोरीहरुका बारेमा ऊ जानकारी लिइरहेको थियो । उसले मित्रलाई क्याम्पभित्रका सम्पूर्ण गतिविधि बतायो । उसले क्याम्पकोे अवलोकन गर्ने आग्रह ग¥यो । अवलोकन गराउन पहिले त ऊ मानेको थिएन तर उसले धेरै ढिपी गरेकाले सम्पूर्ण क्याम्प उसले देखायो । ऊ क्याम्पभित्रको विभिन्न ठाउँमा पुग्दा सिपाहीहरुद्वारा सम्मान पाइरहेको थियो । उसले बिद्रोहीले आक्रमण गर्न सक्ने स्थिति र क्याम्पको कमजोरीका बारेमा सोध्दा ऊ विश्वास गरेर बताइरहेको थियो । भूमिगत मित्रले पहिले नै सरकारी कार्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा काम गरिरहेको बताइसकेको थियो । ऊ सरकारी कर्मचारी हो भन्ने सोचेर र पुरानो मित्र सम्झेर युद्ध कौशलता, बिद्रोहीसँग बच्न, भिड्न प्रयोग गर्ने योजनाको बारेमा बताइरहेको थियो । उसले हरेक सिपाही रातमा हुनसक्ने भीषण भिडन्तका लागि तयार रहेका र प्रत्येक सिपाही र अफिसरहरु बन्दुकको नालमा जीवन राखेर रात काटिरहेको बतायो । उसले यी कुरा भन्दा ऊ मौन थियो । मेजरले बिद्रोहीहरुको विरोध गरिरहँदा ऊ हो हो भनेर बाहिरबाहिर सही थापिरहेको भए पनि भित्रभित्रै बलिरहेको थियो । ‘सुरक्षाकर्मीहरुले पनि जनतालाई विनासित्तिमा दुःख दिइरहेछन् भन्ने सुनिन्छ त ? बिद्रोहीहरु पनि जनताको मुक्तिका लागि लडिरहेकाछौं भन्छन् नि ?’ उसले उसलाई व्याङ्गे प्रहार ग¥यो । ‘सोच्नोस् मित्र । उनीहरु केका लागि युद्ध गरिरहेका छन् ? गरिब जनताको मुक्तिका लागि लडिरहेका छौं भन्छन् तर एकछाक खान नपुग्ने र हलो जोतिरहेका हलीको टाउकोमा बम राखेर हली र गोरु मार्छन् । पैसा हुने र गाउँमा शोषण गर्नेहरु सदरमुकामको सुरक्षाघेराभित्र बसिरहेका छन् । हामी भने उनीहरुको जीवन सुरक्षा गर्न आफ्नो जीवन बन्दुकको नालमा बिछ्याएर रात काटिरहेका छौं । साँच्ची पारि गाउँमा हलो जोत्ताजोत्तै एकजना कृषक बम बिस्फोटन भएर मरेछ । मित्र भन्नुहोस् उसको के दोष थियो ? बिद्रोही मित्रहरुको के बिगारेको थियो ? ऊ त त्यस गाउँको जमिन्दारको हली थियो । उसको घर पनि गोठ भन्न लाएकको थिएन । यही हो जनताको युद्ध !’ मेजरले त्यसो भनिरहँदा धने माइलो मारिएको उसलाई याद आयो । तर ऊ केही नबोली मेजरको भनाइलाई समर्थन गर्दे उसका कुरा सुनिरहेको थियो ।
‘मित्र तपाई त शहरमा बस्नु हुन्छ । यहाँ गाउँमा जनताले कति दःुख पाएका छन् त्यो तपाईलाई थाहा छैन होला । हामीले पनि जनतालाई दुःख दियौ होला । हामीले गल्ति गरेका छैनौं र हामीद्वारा जनता पीडित भएका छैनन् भन्न म चाहन्न । युद्धकालमा बिद्रोहीलाई सेवा दिएको र सहयोग गरेको निहुमा नागरिकहरु मारिएका वा पक्राउ परेका अवस्य छन् । त्यसमा कति दोषी र कति निर्दोश व्यक्ति परेका होलान् तर बिद्रोही मित्रहरुले जनतालाई गरेको पीडा कसले बुभ्mछ ? हो हामीहरु उनीहरुसँग लड्न र युद्ध गर्न चाहन्नांै तर सरकारले लगाएपछि हामीले गर्नैपर्छ । हामी आफ्नै मित्रहरुसँग लडिरहेका छौ । आफ्नै दाजुभाइहरुसँग लडिरहेका छौ । नेपालीसँग नेपाली लडिरहेका छौ । आखिर मित्र भन्नोस् ! हामीले युद्ध गरेर के पाउँछौं । पीडा, चीत्कार, भग्नावशेष, गरिबी, जर्जरता, कुरुपता । हिजोको त्यो सुन्दरशान्त देश आज आगोमा बलिरहेछ । हामीले युद्धमैदानमा लडेर जिते वा हारे पनि हाम्रो जित वा हार हँुदैन । माथि केन्द्रमा बसेर शासन गर्ने व्यक्तिहरुको जित हुन्छ । हामी भने युद्धमैदानमा बन्दुक सिरानी हालेर अनिदो रात काट्नु पर्छ । बिद्रोही मित्रहरु पनि यो कुरा किन बुभ्mदैनन् ? बन्दुकको बलले कहांँ सत्ता प्राप्त भएको छ र ? यदि उनीहरु जनताकै लागि लडिरहेका छन् भने जनताको विश्वास जित्नु पर्छ । बन्दुक लिएर मात्रै लड्नु पर्छ र जितिन्छ भने कुरा दिवासप्ना हो । उनीहरु सत्ता प्राप्त गर्न खोज्छन् भने चुनावमा गएर सरकारमा आए भैहाल्यो नि ! हाम्रो कार्य सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नु हो । उनीहरु भोलि सत्तामा आएर हामीलाई जे आदेश दिन्छन् । त्यो हामीले मान्नै पर्छ । आज हामीबीच लड्नु नेपालीले नेपालीलाई मार्नु बाहेक अरु केही उपलब्धि हुँदैन ।’ उसले युद्धकालको भयावहता र अनाहकमा निर्दोश व्यक्तिहरु, बिद्रोहीहरु, आफ्ना समकालीन मित्रहरु, आफ्नै दाजुभाइहरु, देशका नागरिकहरु मरिएकोमा रोष प्रकट ग¥यो । मेजरले यसरी बक्दा ऊ मौन भएर सुनिरहेको थियो । रात धेरै छिपिसकेकाले मेजरले भोलि भेटेर कुरा गर्ने आग्रह गर्दै उसलाई सुताउन पठायो ।
ऊ ओछ्यानमा गएर सोच्न थाल्यो । ‘हामी किन लडिरहेका छौं ? हामीले निर्दोष जनता, आफ्नो र परिवारको पेट भर्न बन्दुक बोक्ने सिपाहीलाई मारेर के पाउँछौं ? उनीहरुका परिवारका आँसु, पीडा, राष्ट्रको जर्जरता, हो ! हामीले पाउने यही नै हो । क्रान्ति भनेको बन्दुक बोक्नु मात्र होइन । विचार बोक्नु पनि हो । महात्मागान्धीले गरेको अहिंसाको आन्दोलन पनि क्रान्ति नै थियो । त्यही क्रान्तिले भारतमा स्वतन्त्रता स्थापित ग¥यो । हामी चाहिँ किन बन्दुक बोकिरहेका छौं ? हामी किन जनतासँग भोट मागेर सत्ता प्राप्त गर्दैनांै, किन ? जनताको एउटा भोट एउटा गोली हो । बन्दुकको गोलीभन्दा जनताको भोट कति शक्तिशाली हुन्छ ! चुनावबाट आउने अमेरिकी राष्ट्रपति कति शक्तिशाली छ ।’ उसले फेरि सोच्यो– ‘अब हामी परिवर्तन हुनैपर्छ । वर्तमान सरकारसँग निर्वाचनको माग गरेर चुनावमा जानैपर्छ र जनताको मन जित्नैपर्छ । तर त्यो निर्वाचनपछिको सरकार शक्तिशाली होस् र त्यसले जस्तोसुकै निर्णय गर्न सकोस् ।’ उसले आफ्ना दुबै हात कडा पारेर मिलायो । ऊ ओछ्यानमा ढल्कियो र निदायो । त्यस क्षणमा उसले आफ्नो बन्दुक सम्झियो । ऊ दुस्मनको क्याम्पतिर हिँड्नुभन्दा अघि उसको हातमा बन्दुक थियो । उसले त्यही हातले धेरै पटक बन्दुक पड्काएको थियो । फायरिङ गरेको थियो । उसलाई बन्दुकको अझै धङधङी थियो । उसको हातमा बन्दुक हुँदा आफूलाई ऊ निडर भएको सम्झिन्थ्यो । उसले आफ्नो हात मुठ्ठी खुलाएर हे¥यो । उसलाई हातमा बन्दुकको छाया भएको भ्रम भयो । उसले छाया मेटाउन दुबै हात घर्षण गरेर मोल्यो र टक्टक्यायो । तर उसले आफ्नो हातमा अझै बन्दुकको छाया देख्यो । ऊ झसङ्ग बिउँझियो । ऊ बिउँझदा झिसमिस भइसकेको थियो । ऊ उठ्यो र मेजरसँग बिदा नमागी क्याम्पको गेटमा आइपुग्यो । आफू हिँडेको समाचार गेटमा छाडेर ऊ फटाफट सडकबाट पूर्वतिर लाग्यो । उसको छाया क्याम्पको गटेबाट बिस्तारैबिस्तारै मधुरो हुँदै विलीन भयो ।
प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : शनिवार, 10 बैशाख, 2068
साहित्यकार गोवद्र्धन पूजासँग छोटो कुराकानी
साहित्यकार एवम् समालोचक डा. गोविन्दराज भट्टराईसँग कुराकानी
साहित्यकार प्रदीप नेपालसँग छोटो साहित्यिक कुराकानी
वरिष्ठ साहित्यकार एवम् संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीसँग भेटवार्ता
वरिष्ठ प्रगतिवादी साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रितसँग भलाकुसारी
साहित्यिकार श्रीओम श्रेष्ठ “रोदन”सँग भेटवार्ता
डा. चूडामणि बन्धुसँग छोटो कुराकानी
देशको कारुणिक चित्र भएका कविताहरू
स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने कविताहरू : मनको शिविरबाट